Saan-saantii Saadaashii Sarraynta Kulmiye Saakay Rumowday | Somaliland.Org
Saan-saantii Saadaashii Sarraynta Kulmiye Saakay Rumowday
March 31, 2008	Hambalyo Guul-ku dhamaadka shir-weynaha Kulmiye ee 2aad iyo hogaankiisa miisaaman. Hambalyo Shacbiweynaha reer Somaliland iyo rajada saarnayd garbaha Kulmiye iyo shir-weynaha oo guul ku dhamaada oo suurtowdey. Haaaakah Eeebow adaa mahad leh.
Hambalyo Gudoomiyaha Xisbiga Muj. Axmed Maxamed Maxamuud(siilaanyo) iyo ku-xigeenadiisa cusub 1aad Muj. Musa Biixi Cabdi, 2aad mudane Cabdiraxmaan Cabdulqadir, 3aad mudane Cabdiraman Maxamed Talyanle, iyo 4aad inj. Cabdiraxman Cabdullaahi Ismaciil (Seylici).
Hambalyo xoghayaha guud ee xisbiga Kulmiye Mudane Keyse Xasan Cige. Hambalyo iyo buugaadin 170 ka xubnood ee loo doortay golaha dhex ee xisbiga Badbaadinta rajada midnimada barwaaqo u sahaminta Somaliland. Kaasu waa KULMIYE.
Hadaan intaa ku dhaafo habalyada, an waxan waxyar ku darsada farxada iyo dabaaldegga maanta oo Isniin ah ka socda Hargeysa Somaliland. Saaxiibayaal samawadayaal samir-badnayaal waan idin salaamayaa saaciidadii Somalilandna saaka kow dheh, saxalkii bexye laba dheh, saan-saantii sarraynta Kulmiyena rumowdey e’ sadex dheh.
Hadaan iska waramo Axmed ahaan ma’ garanyo goor iigu danbeysey farxad qaraddan leh waxad in… maya iga daa waxaan ku qiyaasoba garanmaayee.
Somaliland hanoolaato, ammaano Alla.
Axmed Yuuuf Ducaale, London, UK.